Alahady faha-23 D tsotra mandavantaona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady faha-23 D tsotra mandavantaona
Tsy misy mahalala ny hevitr’Andriamanitra, (Vak.I) indrindra rehefa mifatotra noho ny Evanjely isika (Vak II) ka maniry ny fiadanan’ny ratsy fanahy (sal 73) ! Ny fahatsapana izay fahalemena izay (Sal 89 setriny) sy ny fahatsapana ny fahalementsika (fanetren-tena) no manosika antsika hanaraka marina an’i Kristy ka nahatsiaro mandrakariva ny teniny hoe : “Raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona na inona ianareo” (Jn 15, 5b). Dia izay no hiandrandrantsika mandrakariva ny fahasoavany, hahatsapantsika fa eo anivontsika izy, ka mamindra fo sy miantra. Izy ilay miandry ny fiverenan’ny Zaza Mpandany sy mitondra eo an-tsorony ny ondry nania.
 Jereo ny fivoasana tamin’ny alahady heriny 22D)
< Alahady faha-24 mandavantaona - D
Alahady faha-23 D mandava-taona >